Kitapo loharanom-pahalalana mitentina 15.000 $ ... $ 79 ihany! | Famoronana an-tserasera
Resource Pack mitentina 15.000 $… $ 79 ihany!
Mampivelatra ny katalaogin'ny loharano manokana ve ianao? Te hamelona ny tahirinao miaraka amin'ny fitaovana avo lenta sy amin'ny vidiny mirary ve ianao? Raha eny dia hataonay mora foana ho anao anio. Manaraka izany dia manome anao tolotra manokana kitapo fampiroboroboana loharanom-pahalalana premium isan-karazany izahay ary sarobidy amin'ny zavatra hafa ary tsy ambany noho izany $ 15.000. Na izany aza, ny vidiny fandefasana dia $ 79, Na inona no mitovy, 73 euros. Mba hahafahana misintona azy dia tsy maintsy mitsidika fotsiny ianao ny adiresy manaraka. Fa inona no manokana amin'ity tolotra ity?
Raha ny kalitao sy ny zon'ny fampiasana dia misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny loharanon-karena maimaimpoana sy ny loharanom-bola maimaimpoana. Premium. Marina izany. Saingy ny fihenan-danja lehibe hitantsika amin'ny loharanom-bola premium dia amin'ny tranga maro dia ahitantsika ny vidin-javatra mihoampampana izay tsy zakantsika ny fahazotoana ilaintsika. Zava-dehibe izany ianarantsika mifidy sy mikaroka ny tolotra tsara indrindra sy ny fampiroboroboana. Amin'io fomba fijery io, dia mahasoa kokoa antsika ny mahazo ny fitaovantsika sy ny loharanontsika amin'ny fonosana, repertoires na fonosana misy fitaovana isan-karazany avo lenta azo ampiasaina (fanararaotana ara-barotra) tafiditra ao. Aza misalasala ary araraoty izao fotoana izao tsindrio eto.
Manandrana manome izahay avy amin'ny Creativos Online safidy, mba hanomezana an'ity karazana fonosana sy tolotra manokana mifantoka amin'ny singa kalitao ity. Tsy tokony hohadinointsika fa amin'ny faran'ny andro dia fitaovana ireo izay hisy fiatraikany mivantana amin'ny asantsika, ny valiny ary ny tombokase matihanina ananantsika.
Nahoana no zava-dehibe ny ianaranao mifantina sy manivana amin'ny alàlan'ny kitapom-batsy?
Fampitomboana ny azo atao: Matetika ny fonosana dia misy loharanom-pahalalana isan-karazany ary izany dia azo adika ho azo ampiharina. Hanana fitaovana ampy hampiroboroboana karazana asa isan-karazany isika. Ho fanampin'izany, ireo fonosana ireo dia mazàna mikendry karazana tetikasa manokana na lohahevitra voafaritra tsara. Midika izany fa hanana tahiry voarafitra tsara sy voarindra ary tsy miovaova. Raha mila miatrika tetikasa misy karazany iray isika ary manana loharanom-bola izay manodidina ity olana ity dia hanana fahafaha-manao bebe kokoa sy làlan'ny fampandrosoana isika.
Toe-karena: Etsy ankilany, ity karazana safidy ity dia hanome antsika tahiry be. Ny fananana fitaovana dobo lehibe dia hanampy antsika hanangona fotoana. Raha mahazo loharanom-pahalalana mifantoka amin'ny lohahevitra na lohahevitra manokana isika rehefa mila miatrika tetik'asa mitovy amin'izany, dia hitsitsy fotoana lany amin'ny fikarohana loharano mety. Etsy ankilany, satria fonosana izy ireo, ny fihenam-bidy dia misy dikany amin'ny fampiroboroboana. Raha ny lojika, ny vidin'ny loharanom-pahalalana amin'ny ambaratonga tsirairay dia ho avo kokoa noho ny vidiny ho hitantsika raha mividy azy ireo amin'ny vondrona iray isika.
Fahamarinana, fahaizana miatrika tetikasa ary manisy fahasamihafana amin'ny famoronana: Amin'ny farany, ireo rehetra ireo dia niafara tamin'ny fandikana azy ho amin'ny hakingan-tsaina bebe kokoa, fahamoram-panahy ary fahaiza-mamorona, izay amin'ny fotoana maharitra dia hiafara amin'ny fanaovana fahasamihafana ary hisy fiantraikany amin'ny hajia matihanina.
Androany aho mitondra anao tena vatosoa ho an'ny matihanina rehetra amin'ny sehatra misy anay. Kitapo mega misy karazany maro indrindra izay mikasika ny refy isan-karazany amin'ny asanay ary misy fonosana mahaliana isan-karazany izay hanohana ny asanay amin'ny maha-mpamorona azy:
Vahaolana voafaritra: Ity fonosana mega ity dia misy andian-tsarimihetsika vita amin'ny taovolo izay mamela anao hiasa amin'ny famahana sy famaritana avo lenta amin'ny tetikasa rehetra. Voasokajy ho sokajy, afaka mahita fonosana maherin'ny 450 sy vahaolana vahaolana fanampiny efa ho 1000 9000 ianao, $ XNUMX avokoa.
Teknolojia avo lenta: Miankina mivantana amin'ireo tahirin-kevitra ampiasaina ao anatin'ilay fizotrany ny firafitra. Ny fonosana dia misy fanangonana endrika maoderina dimy ambin'ny folo izay hanome valiny tsara indrindra amin'ny karazana fananganana sary. Ny refin'ireo antontan-taratasy ireo dia 6000 x 4000 teboka ary mitentina 225 $ izy ireo. Fanampin'izany, ny firakotra an-tsary 87 fanampiny avo lenta dia ampidirina amin'ny $ 994.
Fanampiny, fihetsika, fomba ary fanesoana: Ny fananana plugins sy effets azo ampiharina haingana dia mety hahaliana satria afaka mamonjy fotoana be dia be ary manome valiny tsara. Eto ianao dia hahita ny vokarin'ny sehatra matihanina sy ny fampiharana eo no ho eo toa ny HDR effets, fihetsika ho an'ny sary na ny sary mombamomba ny sary ary ny vokatry ny watercolor. Ity fampiroboroboana ity dia misy koa repertoire 14 fonosana fanampiny izay mitentina 210 dolara, fantina endrika 60 ho an'ny tee-shirt misy sanda 900 dolara ary, raha tsy ampy izany dia nofidina ny mock-up misy fanohanana samihafa ary scenario.
Fampianarana maody premium 15: Ny lesona premium dia matetika manome haavon'ny halaliny sy marimarina kokoa noho ny fanazaran-tena maimaim-poana. Ao amin'ity fonosana ity dia hahita lesona 15 mandroso izay mitentina $ 197 ianao.
Kit UI UI 9 mitentina $ 135: Ny famolavolana ny interface dia iray amin'ireo lahasa ilaina indrindra amin'ny mpamolavola tranonkala, ny fananana môdely modely azo ovaina sy azo ovaina dia afaka manome antsika fotodrafitrasa lehibe rehefa mampivelatra ny tetikasanay sy ny asa. Izany dia hidika amin'ny fluidity bebe kokoa ary noho izany dia mitsitsy fotoana sy loharanon-karena ary noho izany ny vola.
Endritsoratra matihanina 4 sy ny fianakavian'i Tatiana Font miaraka amin'ny fahazoan-dàlana fampiasana (fahatsapana tsy manam-petra) mitentina 30 $.
Loharanon-tranonkala 101 sy fonosana fanontana mitentina $ 1070. Ny set dia misy sary mihetsika maro karazana vectorized fisaka sy singa hafa toy ny infografika, bokotra na menus.
Plugins 109 ho an'ny Adobe Photoshop sy Illustrator mitentina $ 1.036 $ izay isan'ireny ny fitaovana ho an'ny fampandrosoana sy ny maodely 3D, ny add-on hanampy ny feon-java-maneno, ny famirapiratana ary ny halalin'ny famoronana sy ny vokatry ny typografika isan-karazany.
Borosy 67 ho an'ny Adobe Photoshop mitentina $ 486.
Iray amin'ny tanjaky ny tolotra ity ny fahamaroan'ny fahalalahana omeny antsika. Amin'ny alàlan'ny fampidirana fahazoan-dàlana tsy misy mpanjaka dia manana sehatr'asa lehibe tokoa isika. Midika izany fa azo ampiasaina miaraka daholo ny entana tafiditra tanjona ara-barotra amin'ny fomba tsy manam-petra (tsy manafatra famerenana na fahatsapana) ary azo ampiasaina ho entam-barotra ary mamela antsika hahazo fiverenana ara-toekarena mivantana avy amin'izy ireo.
Ity misy santionany kely amin'ny fitaovana mandrafitra ity fampiroboroboana ity:
Sintomy ity fonosana Premium Resource Pack ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Resource Pack mitentina 15.000 $… $ 79 ihany!
+ Endritsoratra sarimihetsika maimaim-poana +20